English News @11:00, 30 November 2018 – Zibonele FM | 98.2
English News @11:00, 30 November 2018
Written by Ashia Nkontsa on 30/11/2018
Idabi le Afri –Forum ne Palamente malunga nomhlaba
Kulindeleke ukuba inkundla ephakamileyo eKapa yenze izwi namhlanje kwidabi lenkundla phakathi kweAfri Forum kwakunye nePalamente kumbandela wokuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo, kulandela ukunqunyaniswa kwale nkqubo izolo. I-Afri-Forum ifuna isigunyaziso senkundla sokurhoxiswa kokuphononongwa kwengxelo yekomiti ephonononga umgaqo-siseko nendulule ngelithi makwenziwe inguqu kwisolotya lamashumi amabini anesihlanu kumgaqo-siseko weli lizwe khon’ukuze uvumele ukuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo, ukanti i-Afriforum ifuna le nyewe ichotshelwe ligqiza leejaji.
Inkantolo ithathe isigqibo sokuxhasa abahlali base Michells Plain
Inkundla yomgaqo siseko ithabathe isigqibo ngokuxhasa abahlali baseMichells Plain. Oku kulandela emveni kokuba ababahlali balugcwabevu ngumsindo sekulithuba bekrutha kruthana nenkampani yokwakha kulammandla iCape Town Community Housing Company emvani kokuba inkundla ifumanise ukuba izivumelwano ezilishumi elinesibini ezinikezelwe kubahlali yilenkampani bezingekho mthethweni. Lenkampani yasekwa ngesivumelwano esimanyeneyo ukuba sisebenze ngaxhathalinye nokopolotyeni wezibonelelo zokwakha kuzwelonke khonukuze yakhe izindlu ezixabiso lifikelelekayo kwabo bangathathi ntweni suka ndawi yoko ababahlali balishumi alinesibini bafumanisa ukuba ezizindlu zakhiwe ngezixhobo ezingekho mgangathweni ngabula bona nantoleyo ikhokelele ekungabonini ngasonye phakathi kwabo nalenkampani nanjengoko kuye kwanyanzeleka ukuba bachithe intywenka yemali ukulungisa ezozindlu.
Konzakele inkwenkwana kisigaba sendlela i-Chapman’s Peak
Ifumene umonzakalo omandla inkwenkwana eneminyaka emithathu ubudala ngethuba kungquzulana okweenkunzi zegusha izithuthi ezimbini kwindlela i-Chapman’s Peak eHout Bay. Usomlomo wabezonyango kwinkonzo ezingxamisekileyo kwa-ER24 u-Ineke van Huyssteen uthi ngethuba amagosa abo efika kwindawo yexhwayela, besele ligalelekile igqiza lecandelo lomlilo linikezela ngoncedo lokuqala kule nkwenkwana. Uthi baye bathabathisa apho nonyango lokuxhasa impilo phambi kokulibalekisela esibhedlele ixhoba ngophephelemhlana, ukanti ulebele ngelithi ukho nowasetyhini ofumene umonzakalo ongephi koko akavuma ukusiwa esibhedlele. Ukuzakuthi ga ngoku isizekabani salentleke sisaphandwa kodwa akukabanjwa mntu ngesisiganeko.
UTom Moyane unikwe uphuma phele kwi ofisi yeenkonzo zeRhafu
Onikwe uphumaphele njengomkomishinala wenkonzo yerhafu yeli lomzantsi
afrika umnumzana Tom Moyane udizwe ngumongameli weli uCyril Ramaphosa njengongayilungelanga la-ofisi ngelithi uxuba iimvakalelo zakhe
zokobuqu kwakunye nezo zelizwe lomzantsi afrika. Umongameli ukuthethe oku kwingxelo yakhe efungelweyo ngeliphendula lokaMoyane kwisicelo sakhe sokucel’umngeni isigqibo senkundla sokumsusa esikhundleni sakhe.
ngokweengxelo ezikhutshiweyo umongameli utyeshele ungenelelo lobefudula engumongameli weli uJacob Zuma kwelityala ngelithi uphulukene kwaphela nethethemba ngakuMoyane kula-ofisi nanjengoko emchaze ngelokuba akabonisanga ntlonipho nangqiqo ngakuyo.
Kulindeleke ukuqhawu qhawuka kombane kweli ngentsimbi yethoba
Inkampani ephehla amandl’ombane kweli lomzantsi afrika uEskom namhlanje ubhengeze ukuba ukhona umngcipheko wokuqhawu qhawuka kombane nanjengoko sele ephumile kwisigaba sokuqala kodwa iziphathamandla zithembise ngelithi ukuqhawulwa kombane kwakwenziwa kuphela ukuba kunyanzelekile. Lenkampani idize ukuba okukuqhawulwa kombane kulindeleke ukuba kuqale phakathi kwentsimbi yethoba kusasanje nentsimbi yeshumi ebusuku ngenxa yokuphulukana ne yunithi ezibalekayo kubusuku esibuvukayo kwesisigaba sesibini nanjengoko sidinga iimegawathi ezingamawaka amabini ukuze sibhungce kolucelomngeni. Abemi beli lomzantsi afrika bayacelwa ukuba basebenzise umbane ngononophelo becima ke kambe izinto ezingeyomfuneko ukuncedisana nalenkampani ekongeni umbane.
Amalungu epalamente alungiselela ukuphelisa ulwaphulo mthetho kuManina nabantwana beli
Ipalamente yelizwe loMzantsi Afrika ingenelele kwizikhalo zoluntu zokuba lupheliswe nya ulwaphulo-mthetho olujoliswe kumanina nabantwana. Ipalamente ikuvakalisa oku xa kanye kuqatshewa iintsuku ezilishumi elinesithandathu zokuchasana nodushe olujoliswe kwisini esithile. Ukanti agxwala ngokunga anezigxala amalungu epalamente aphuma kumaqela ahlukeneyo ezopolitiko esithi mayibhangiswa le ngxaki nalapho ophuma kwi-IFP unkosikazi Liezel van der Merwe atyhola urhulumente ngokufeda ukuseka amaziko aneleyo okunikezela ngophululo lomphefumlo kumaxhoba odushe. Uthi kutshanje, umongameli Matamela Cyril Ramaposa uvumile ukuba udushe ngakumanina nabantwana yingxaki enkulu edunga-dunga ukuhlala kodwa nangona kunjalo uhleli nje, uthe bhuu imisebe akukho ntshukumo ayenzayo.